बोर्डको नेपाल चिनाउने फोटोनेपाल वेबसाईट सार्वजनिक, भ्रमण बर्ष २०२० लाई पुग्ला त सहयोग ? - Bizkhabar Online
बोर्डको नेपाल चिनाउने फोटोनेपाल वेबसाईट सार्वजनिक, भ्रमण बर्ष २०२० लाई पुग्ला त सहयोग ?
बिजखबर संवाददाता २०७६ भदौ २४ (September 10, 2019) मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले फोटोनेपाल डट ट्राभल नामक वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ । बोर्डले फोटोमार्फत नेपाल चिनाउने उद्देश्यले उक्त वेबसाईट संचालनमा ल्याएको कार्यकारी अधिकृत दिपकराज जोशीले जानकारी दिएका छन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सो वेबसाइट मंगलबार एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरेका हुन । वेबसाइटको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री भट्टराईले भ्रमण वर्षको तयारीलाई फोटोनेपाल डट ट्राभलले भ्रमण बर्ष २०२० लाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेका छन ।
बोर्डका कार्यकारी प्रमुख दीपकराज जोशीले वेबसाइट सुरु भएसँगै फोटोमार्फत देशको प्रवर्द्धन गर्न बोर्डको अभियान अर्को चरणमा प्रवेश गरेको बताए । फोटोग्राफरका लागि यो वेबसाइट आफ्ना तस्बिर प्रदर्शन गर्ने राम्रो प्लेटफर्म हो ।
विज्ञ तथा वरिष्ठदेखि लिएर नव सिकारुसम्मलाई फोटो देखाउन र प्रतिक्रिया लिन सहज हुने छ । नेपालका विविध फोटोहरु खोज्न सहज हुने छ भने वेबसाइटमा भएको सर्च फिचर प्रयोग गरेर आफूलाई चाहेको फोटो खोज्न सकिनेलगायतका विशेषता रहेका छन ।
यो वेबसाइट दैनिक ५ हजारभन्दा बढीले हेर्न सक्छन् भने दैनिक साइनअप ५० प्लस छ । अहिले वेबसाइटमा एक हजार फोटा रहेका छन ।
भ्रमण बर्ष लक्षित छेच्यु साँस्कृतिक महोत्सव जिरीमा हुँदै, ५ हजार पर्यटकले अवलोकन गर्ने
जुर्मुराउँदै मधेशको पर्यटन, धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना
हवाईभाडा घटे पर्यटक भित्र्याउने चिन्ता गर्नुपर्दैन : सुगतरत्न कंसाकार
त्रिभुवन विमानस्थलमा पर्यटकलाई सघाउन पर्यटन परी, ३ भाषामा यसरी दिनेछन सेवा
लसएन्जल्स ट्राभल एन्ड एडभेन्चर प्रदर्शनीमा नेपाल, भ्रमण बर्षको प्रचार गर्दै टान
सबै अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई उडान अनुमति दिन पर्यटन मन्त्रीको निर्देशन, नेपाल कोरोना मुक्त घोषणा
विदेशी पर्यटकबाट ६ महिनामा भित्रियो पौने ४३ अर्ब, नेपालीले विदेशमा गएर गर्ने खर्चमा २१ प्रतिशतले गिरावट
नाट्टा गण्डकी अध्यक्षमा सिग्देल, महासचिवमा गिरी
बैंकको ढिलासुस्तीले उखु किसानले समयमै पाएनन् भुक्तानी
भूकम्पको पाँच वर्ष : पौने ५ लाख घर निर्माण सम्पन्न, ८० हजारले मात्रै लिए सम्पन्नताको प्रमाणपत्र
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा कर्मचारीको लापर्वाही, समयमै निर्माण सम्पन्न हुनेमा आशंका
दैनिक रेकर्ड तोडदै सुनको मूल्य, प्रतितोला ८० हजार ३ सयमा कारोबार हुँदैं
अब केही वर्षमा नेपालमा पनि ‘बुलेट ट्रेन’ चल्छ
नेप्सेमा कोरोना भाइरस प्रभाव : हुण्डीको पैसा ‘सर्टटर्म ट्रेड’मा थुप्रिदा बजारमा उछाल
सुनमा मूल्यवृद्धिको असर बजारमा, दैनिक व्यापार ३० किलोले खस्कियो
दुई लाख स्मार्ट लाईसेन्स छापेर तयार, नयाँ प्रिन्टर ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्यो
सरकारी निकायहरुबीच नै समन्वय नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढेको छ
महासंघमा गुट छैन, मन मिल्ने एक ठाउँमा भएका मात्र हौं
राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण बैंकबाट कर्जा लिने ग्राहक सहकारीमा केन्द्रित भएका छन्
हामी देशैभर मेरियट होटल बिस्तारको योजनामा छौं
नेपालमा करसुधारका प्रयास र करदाताको अनुभव : पर्शुराम दाहालको बिचार
अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले खस्किएको नेपाली पर्यटन उद्योग : अम्बिका श्रेष्ठको लेख
अस्पष्ट नीति र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले फस्टाउन नसकेको उद्यमशिलता विकास : युवा उद्यमी प्रकाश तिवारीको लेख